गृहपृष्ठ » अन्तर्राष्ट्रिय » अमेरिकामा अति सामान्य दम्पतीमाथि राष्ट्रद्रोहको अभियोग लाग्दा दुनियाँ चकित, कारण भने यस्तो छ
काठमाडौं । दुनियाँमा अनेक खालका चोरी हुने गरेका छन् । हालै एक दम्पतीमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ । अमेरिकामा एक दम्पतीमाथि गम्भीर खालको सैन्य दस्ताहरु बेच्न खोजेको आरोप लागेको हो ।
सोही आरोपमा उनीहरुलाई गिरफ्तार समेत गरिएको छ । अहिले अदालतमा उनीहरुको बहस पनि जारी रहेको छ । यदी उक्त आरोप पुष्टि भएको खण्डमा उनीहरुको बाँकी जीवन जेलमा सड्छ ।
बीबीसीमा अनुसार ४२ वर्षीय जोनाथन टोएबे र उनकी ४५ वर्षीया पत्नी डायना एक पेशेवर व्यक्तिहरु हुन् । उनीहरु लामो समयदेखि आरामदायक तर अति सामान्य जीवन जिउँदै आएका थिए ।
अमेरिकाको मेरील्यान्ड राज्यको राजधानी एनापोलिसको तटीय क्षेत्रमा रातो इट्टाको घरमा उनीहरु दुई सन्तान, दुई पिटबुल (कुकुर), साशा र फ्रैङकलिनसँग एक सुखद जीवन बाँच्दै आएको बताइन्छ ।
उनीहरुको वरपर सडक र अग्ला रुखहरु छन् । नजिकै एक वाटर पार्क पनि रहेको छ । उनको घर वरपर काटिएको घास पनि छ । उनको घर पुग्दा मिठो मिठो सुगन्ध आउने गर्दछ । त्यहाँ हट हार्बर र संयुक्त राज्य नौसेना एकेडेमी पनि रहेका छन् ।
दुःखको कुरा के भयो भने, सो घरमा कायम शान्ति ९ अक्टोबरमा सकियो । जब अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीहरु टोएबे परिवारको घर गएपछि उक्त घरमा जारी रहेको शान्ति भंग भयो । जानकारी अनुसार त्यहाँबाट ६ हजार किलोमीटर टाढा जेफरनस काउन्टी, पश्चिम भर्जीनियासम्म यो दम्पतीको पछाडि थियो । अमेरिकी अधिकारीहरुका अनुसार टोएबे दम्पतीले यी क्षेत्रहरुमा तथाकथित तरिकाबाट देशद्रोहको प्रयास गरेका थिए ।
उनीहरुमाथि एक विदेशी सरकारलाई अमेरिकी सैन्य रहस्यहरु बेच्न खोजेको आरोप लागेको छ । पश्चिम भर्जीनियाको एक संघीय अदालतले बुधवार जोनाथन टोएबेलाई जेलमा नै राख्नुपर्ने आदेश सुनायो । तर रोचक कुरा के भयो भने उनकी पत्नीका लागि अलग आदेश जारी गर्ने भनियो, तर मिति तोकिएको छैन । राष्ट्रीय सुरक्षासँग जोडिएको विषयमा एक सामान्य दम्पतीमाथि भइरहेको यो केरकारले सबै चकित छन् ।
अमेरिकी अधिकारीहरुद्धारा गरिएको अनुसन्धानलाई लिएर पनि मानिसहरु प्रश्न गरिरहेका छन् । त्यहाँको न्याय विभागका अनुसार जासूसीको शुरुवात अप्रिल २०२० मा शुरु भएको थियो । जब अमेरिकी नौसेनाका कर्मचारी जोनाथन टोएबेले कुनै विदेशी सरकारका लागि काम गर्ने एक अधिकारीलाई इमेलमार्फत एक प्याकेज पठाएर सम्पर्क गरेका थिए ।
उनको नोटमा परमाणु सबमरिनबारे जानकारी प्रदान गर्न सक्छु भनेर लेखिएको थियो । समाचार अनुसार नौसेना परिचालन प्रमुखकहाँ सुरक्षा निकासी विशेषज्ञका रुपमा कार्यरत जोनाथनले सबमरिनमा प्रयोग हुने न्यूक्लियर प्रपल्शन सिस्टमबारे आफु जानकार भएको कुरा उक्त नोटमा दावी गरेका छन् ।
कसरी काम गर्थे जोनाथन ?
अनुसन्धान पश्चात के कुरा खुलेको छ भने जोनाथन जुन विदेशी सरकारसँग सम्पर्क कायम गर्न खोज्दै थिए, त्यो अमेरिकाको मित्र मुलुक जस्तै फ्रान्स आदि थिए । उनले चीन, इरान, रूसजस्ता देशहरुलाई अमेरिकाको सैन्य सूचनाहरु बेच्न खोजिरहेका थिएनन् ।
तर उनले कुन देशलाई सो जानकारी दिन खोज्दै थिए भन्ने कुरा भने खुलेको छैन । जब जोननाथले उनी (एजेन्ट) सँग सम्पर्क गरे तब अमेरिकी अधिकारीहरुलाई जानकारी मिल्यो । एजेन्ट बनेका नौसेना अधिकारीले अमेरिकी अुसन्धानकर्ताहरुलाई यसबारे जानकारी गराए र उनलाई पक्राउ गर्नका लागि पुरा योजना पनि निर्माण गर्न भ्याइसकेका थिए ।
जुन प्याकेज जोनाथनले पठाएका थिए, केही महिनापछि डिसेम्बरमा सो जानकारी एफबीआईकहाँ पुगेको थियो । त्यसपछि एफबीआईले अर्को एक व्यक्तिलाई छद्म विदेशी अधिकारी बनाएर जोनाथनसँग सम्पर्क गर्नु भन्दै पठायो । जुन कुरा उनी दिन चाहान्छन्, त्यो कुरामा उनको रुचि छ समेत भनिएको थियो ।
अमेरिकी सरकारले लगाएको आरोप अनुसार त्यो दम्पती संवेदनशील जानकारी एक एसडी मेमरी कार्डमार्फत जासूसी गर्न खोज्दै थियो । खुफ़िया सामग्री पठाउनका लागि स्पट, जसलाई डेड ड्रप पनि भन्ने गरिएको छ, ति कुराहरु प्रयोग हुँदै आएका थिए । यो सबै कुराहरुमा उनकी पत्नीको निगरानी हुन्थ्यो । जुन, प्रपल्शन प्रविधि जोनाथन र डायनाले बेच्ने प्रयास गरिरहेका थिए, त्यो सेनाको सबैभन्दा ठुलो रहस्यमध्य एक हो । तपाईंलाई जानकारी गराउ कि हालै अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाले पनि यसबारे सम्झौता गरेका छन् ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरुका अनुसार टोएबेले जाच्ने बिन्दु पार गर्नका लागि एक पटकमा दस्तावेजका केही पाना मात्रै साथमा लैजाने गरेका थिए । आफ्नो कथित नोटमा उनले भनेका छन, ‘म, म सँग भएका दस्तावेजहरु मेरो जागिरको रुटिनको समयमा विस्तारै विस्तारै र स्वभाविक रुपमा जम्मा गर्ने कुरामा धेरै सावधान छु । किनकी मैले मेरो कामका बारेमा कसैलाई पनि सुईको दिनु हुँदैन ।’
अदालती दस्तावेजमा उल्लेख भएको जानकारी अनुसार गोप्य जानकारी पठाउनका लागि उनले एसडी कार्डको पीनट बटर स्यान्डविचाको बीचमा राख्ने, च्विगमको प्याकेटमा चिप्काएर वा रेफ्रिजरेटर ब्यागको बेन्ड ¥यापर राख्नेसतिहका तरिका पनि अपनाएका थिए । पीनट बटर स्यान्डविच कार्डको लागि जोनाथन क्रिप्टोकरेन्सीमा २० हजार डलर अर्थात झण्डै २४ लाख नेपाली रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए ।
शुरू शुरूमा जोनाथन शान्त रहन्थे । तर पछि आफु एफबीआई एजेन्ट भएको कुरा परवाह नगरी उनी विदेशीहरुसँग सहज तरिकाले भेट्ने गर्न थालेका थिए । उनको एक नोटमा लेखिएको थियो, ‘कुनै दिन जब यो काम गर्नु सुरक्षित हुन्छ, शायद पुराना साथिहरु एक क्याफेमा रक्सीको बोतलसँगै बसेर उनीहरुसँग मेरो कामका कुराहरु साझा गरेर हाँस्ने मौका मिलोस् ।’ गत हप्ता गिरफ्तार हुनुपूर्व उनले यति धेरै कागज जम्मा गरे कि उनी जासुसी गरिरहेका थिए भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो परेन् ।
छिमेकी के भन्दै छन् ?
उनको गिरफ्तारीको एक हप्तापछि, जोनाथनको घरमा सबै थोक उस्तै छ, जुन उनले जेल जाँदा छोडेका थिए । छतका पंखा, बेसमेन्टमा अधूरा काम, बस्ने टेबलमा भण्डारणसहित मानिसहरुको दिमागमा एउटा प्रश्न छ कि कसरी एक जोडी जसको सबै ठीकठाक चलिरहेको थियो, अचानक एक विदेशी राष्ट्रको लागी देशको रहस्य बेच्न खोजेको आरोप लाग्यो ।
छिमेकीहरुका अनुसार यो जोडी न त धेरै सामाजिक थियो न त पूरै एकलकाँटे नै थियो । जोनाथन मध्ययुगीन हतियारमा रुचि राख्थे र सम्बन्धित र ऐतिहासिक संगठनमा सक्रिय पनि रहेको बताइन्छ । सोही समयमा, उनकी श्रीमती डायना, जसले अटलान्टामा एमोरी विश्वविद्यालयबाट पीएचडीसम्मको अध्ययन गरेकी थिइन् ।
एक निजी स्कूलमा पढाउने उनले यस्तो अपराध गर्छिन भनेर कसैले पत्याउन सक्दैन् । छिमेकीहरुका अनुसार उनी जासूसी गर्न लायक थिएनन् । उनीसँग चम्किलो बैजनी कपाल थियो, जसले उनको पहिचान गर्न सजिलो बनायो । छिमेकी सो दम्पती जासुस भएको कुरालाई स्विकार गर्न तयार छैन ।
के पैसाको कारण अपराध भयो ?
जब व्यक्तिगत र व्यवसायमा टोएबे सफल थिए तब उनले यो सबै किन गर्थे रु दशक भन्दा लामो समयसम्म एजेन्सी जासुसीका केसहरू खोज्ने अल्क्जेन्ड्रिया, भर्जेनियाका मनोचिकित्सक डेविड चार्नेका अनुसार यो रहस्यमयी हुन्छ । अक्सर, मानिसहरूमा परस्पर विरोधी संवेगहरू देखा पर्छन् ।
त्यसका लागि सामान्यतया पैसाको चाहना हुन्छ वा बदला लिने इच्छा चाहिन्छ । कतिपय व्यक्तिहरू मानिसहरू औसत हुँदा पनि प्रबल चाहनाका सर्जक हुन्छन् । उनीहरुमा वास्तवमा लुकेका कुराहरू असाधारण हुन्छन् । ख़ुफ़िया सेवाका लागि काम गर्ने र धोका दिने केविज्ञानका अध्ययन गर्ने मानसिकताले यस उद्देश्यलाई संक्षिप्त नाम दिएको छ, आईसीई (माइस एम) देखि मनी, आईदेखि आइडियोलजी अर्थात विचारधारा, सीदेखि कन्प्रोमाइज अथवा समझौता र ई बाट ईगो महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यसकारण देशद्रोही हुन्छ । जोनाथनलाई पैसा चाहिएको थियो भन्ने ठहर अधिकारीहरुको छ । उनले आफ्नो परमाणु रहस्य बापत क्रिप्टोकरेन्सीमा एक लाख डलर मागेका थिए । यस्तो काम गर्नको लागी पत्नीको आर्थिक समस्या पनि कारण हुन सक्छ भन्ने पनि धेरैको तर्क रहेको छ । न्यायाधीश रोबर्ट ट्रम्बलको इजलासले त्यो दम्पतीलाई अधिवक्ता उपलब्ध गराउन सक्ने बताएको थियो । त्यसको अर्थ के हुन सक्छरु, त्यसको सामान्य जवाफ के हो भने उनीहरु आफ्ना लागि अधिवक्ता व्यवस्थापन गर्न सक्षम छैनन् ।
अर्को अर्थमा भन्दा वकीलका लागि उनीहरुसँग पर्याप्त फि (शुल्क) छैन् । अहिले अब डायनाको प्रतिनिधित्व दुई वकीलहरु गरिरहेका छन् । उनीहरुले पैसाका लागि सो अपराध गरेको भन्ने बुझाई धेरैको छ । तर साथमा यो पनि भनिएको छ, ‘तपाईंको नजरमा उनीहरूको राम्रो घर देखेर विचार आउन सक्छ कि उनीहरूको अवस्था हदसम्म खराब थिएन् । तर तपाईं के सोच्नुहुन्छ भन्ने कुराले फरक पर्दैन् ।
यदि तिनीहरूले परिणामहरूको बारेमा सोचेनन् भने, त्यसले उनीहरूलाई निरन्तर समस्यामा पार्न सक्छ । अनुभवी जासूसहरू पनि आश्चर्यचकित हुन्छन् कि जोनाथनले आफ्नो विचारले कसरी काम गर्नेछ भन्ने सोचेका छन् । उनको प्रविधि बलियो थिएन र ठूलो प्रश्न यो हो कि एक कार्यालय कर्मचारीले कुनै प्रशिक्षण बिना यस्तो जोखिमपूर्ण अपरेशन कसरी गर्न सक्छ ? सीआईएका पूर्व अधिकारी ज्याक डेभिन भन्छन्,‘उनी एक शौकिया जासूस हुन् ।
उनले कुनै तालिम लिएका छैनन् । उनले केवल एक दुई टिभी कार्यक्रम देखेका छन् । उनलाई के लाग्छ भन्ने बारे पूर्ण ज्ञान छैन ।’ उनीहरु भन्छन्, ‘यदि तपाईं आफु ट्रेडक्राफ्ट सिक्न जासूस चलचित्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने, साँच्चै भाग्यशाली हुनुहुनेछ । पक्कै जोनाथन होइन ।’